अवसाद | USAHello | USAHello
धेरै मानिसहरू नम्र निराशा भोगिरहेका गर्न सक्नुहुन्छ. हल्का अवसाद तपाईं केहि महसुस तपाईं दुःखी महसुस वा जब छ. थप दुई भन्दा हप्तासम्म उत्तरार्द्ध, तिमी एक मौलिक depressant हुन सक्छ भने.
गंभीर निराशा तपाईंले थप दुई भन्दा हप्तासम्म हरेक दिन दुःखी महसुस हुँदा छ. तपाईं कुराहरू तपाईं सामान्यतया हरेक दिन गर्न को लागि यो कठिन हुँदा गम्भीर निराशा छ. उदाहरणका लागि, तपाईं ओछ्यानमा बाहिर प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता छैन र आफ्नो दाँत माझ्छु. वा तपाईंले आफ्नो बच्चाको ऊर्जा लागि नास्ता तयार र विद्यालय तिनीहरूलाई लिन आवश्यक छैन.
तपाईं अवसाद देखि पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले निम्न कुरा केही महसुस हुन सक्छ:
धेरै थकित महसुस
धेरै सुतिरहेको वा सुत्न सक्दैन
धेरै खाने वा खान चाहने छैन
आफैलाई हत्या सोच्न
म प्रेम गर्न प्रयोग गर्ने गतिविधिहरु आनन्द छैन
दोषी वा तपाईं केहि गलत थिएन भने पनि खराब को भावना
तपाईं धेरै कारण निराश महसुस गर्न सक्नुहुन्छ. कारण केही हुन सक्छ:
तपाईं आफ्नो काम गुमाउनु वा तपाईं काम पाउन सक्दैन.
तपाईं नजिक कसैले यस्तो परिवारको सदस्य वा मित्र रूपमा मर्न,.
तपाईं एक बच्चा छ.
तपाईं एक अपराध को शिकार हो.
धेरै बिरामी बन्न.
केही दबाइहरु तपाईं निराश महसुस बनाउन सक्छ.
आफ्नो परिवार अवसाद एक इतिहास छ.
तपाईं अवसाद देखि पीडित छन् भने तपाईं मद्दत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, एक परिवारको सदस्य मर्छ भने, तपाईं दुःखी महसुस हुन सक्छ. तर म दुःखी महसुस भने, वा तपाईं पनि धेरै सुतिरहेको हुनुहुन्छ, वा तपाईं मदत गर्न विभिन्न तरिका बारे आफ्नो डाक्टर संग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ दुई भन्दा बढी हप्तासम्म खान चाहँदैनन्,.